असोज ११ बाट जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ, कति कित्ताका लागि दिने आवेदन ? Bizshala -
कोरोना कहरबीच बैंकहरुले सरप्राइज लाभांश बाँड्ने होडबाजी, ग्लोबल आइएमई बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश दिने
एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले एनसेल नेटवर्क भित्र तथा अन्य नेटवर्कमा सुलभ दरमा धेरै कुराकानी गर्न सक्ने
सिद्धार्थ बैंकद्वारा मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पताललाई सहयोग
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको रु. ३० करोडबराबरको आईपीओ आउँदो आइतबार (असोज ११ गते) बाट निष्कासन हुँदैछ।
कम्पनीले चुक्तापुँजी रु. १ अर्बको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका ३० लाख कित्ता सेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको २७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासित गर्नेछ।
यो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि १० हजार कित्तासम्म सेयर आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यो आईपीओमा असोज १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
पछिल्लो समय खुलेका आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या ६ लाख नाघेको छ। यस आधारमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा समेत यही तथ्यांकमा आवेदन पर्ने अनुमान गर्ने हो भने आईपीओ बाँडफाँड लक्की ड्रमा जानेछ।
यता नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको १० कित्ता समावेशी नीतिका कारण ६ लाख बढी आवेदकलाई १०/१० कित्ता सेयर बाँडफाँडमा गोलाप्रथाद्वारा नै हुनेछ। यसैकारण कम्पनीको आईपीओ आवेदनमा १० कित्तामात्रै आवेदन गर्न उचित हुने बताइएको छ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले डबल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङले यस्ता संस्थाहरु वित्तीय दायित्वहरुको समयमै सेवा पुर्याउने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम भएको मानिन्छ। यस्तै कम्पनीको आईपीओले केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। ग्रेडमा प्रयोग गरिने प्लस चिह्नले यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाई जनाउँदछ।
जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्षमा कुनाल कायल र जनरल मेनेजर एसके तमोट छन्।
general insurance company nepal limited IPO
कोरोना अपडेट: ३६३७ थपिए, ३२१५ डिस्चार्ज, थप २१ को मृत्यु
खल्तीबाट प्लेनको टिकट काट्दा सगरमाथामा ब्रेकफास्ट गर्न पाइने
नेप्से १६ सय विन्दु पार, बैंकमा बहार
चैतयता छापियो १० लाख चालक अनुमतिपत्र, कहिलेसम्म पाइने ?
स्विस सहयोगमा ‘कोभिड–१९ एमएसएमई कोष’ को घोषणा, एनएमबी र लक्ष्मी बैंक बने साझेदार
एनएलजी इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज
काठमाण्डौ । लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित एनएलजी इन्स्योरेन्स...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, किन
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो दसौँ...
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, आईपीओ
काठमाण्डौ । आईपीओ जारी मुख्य अजेन्डासहित ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको बीस लाख कित्ताभन्दा धेरै
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको २० लाख...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक...
युनियन लाइफका पोलिसीहरुमा शतप्रतिशत ब्याज छुट
काठमाण्डौ । युनियन लाईफले व्यतीत बीमालेखहरुमा शतप्रतिशत ब्याज छुट...
युनाइटेड इन्स्योरेन्सका सेयरधनीहरु हुने भए खालि हात, २०७५/७६
काठमाण्डौ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अघिल्लो...
बीमा गरेको २६ दिनमै बीमितको मृत्यु, एलआइसीबाट पाउने भए
काठमाण्डौ । रु. १ करोडको जीवन बीमा गराएका एक व्यक्तिको २६ दिनमै...